Al Qaacida oo weerartay Hotel dalxiis oo kuyaala magaalada Bamako +Sawirro+Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Al Qaacida oo weerartay Hotel dalxiis oo kuyaala magaalada Bamako +Sawirro+Video
Dagaalyahano aad u hubeesan oo katirsanaa Kooxda Al Qaacida ayaa Weerar Khasaaro geestay ku qaaday Hotel dalxiis loo tago oo kuyaala duleedka magaalada Bamako ee caasimada dalka Mali.
Shan dagaalyahan ayaa la sheegay in weerar ku galeen Hotelka Dalxiiska loo tago, waxa ayna halkaasi ku afduubteen qaar kamid ah dadkii Hoteelkaasi dalxiiska u tagay ay ku jireen dad ajaaniib ah.
Ciidamada amaanka dalka Mali ayaa durba gaaray Hotelka weerarka lagu qaaday, waxaana la sheegay ciidanka Mali in ay ku guuleesteen in ay dilaan 4 kamid ah ragii hotelka Weeraray , waxaana baxsaday mid kale oo kamid ahaa ragii weerarka ka dambeeyay.
Inta la xaqiijiyay weerarkan ka dhacay hotelka Dalxiiska loo tago waxaa ku dhintay lix qof ay ku jiraan ragii weerarka ka dambeeyay, waxaana dadka dhintay ku jira labo qof oo shacab ah oo mid kamid ah u dhashay dalka Faransiiska.
Kooxda Al Qaacida ee ka dagaalanta Waqooyiga Afrika ayaa sheegatay masuuliyada weerarkan ka dhacay Hotelka kuyaala Duleedka Bomako, waxaana dagaalyahanada weerarka geestay la sheegay in ay ku dhawaqaayeen Allahu Akbar.